Famelabelaran-kevitra nataon’ny ADC: liana amin’ny fananganana orinasa ny tanora, saingy … | NewsMada
Famelabelaran-kevitra nataon’ny ADC: liana amin’ny fananganana orinasa ny tanora, saingy …
Famelabelaran-kevitra lehibe faharoa nomanin’ny Fikambanana olom-pirenena mandray andraikitra (ADC)*ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Naompana momba ny « Fahombiazana amin’ny fananganana orinasa » ny adihevitra.
Nameno ny kianja mitafo ny tanora liana amin’izany fananganana orinasa izany, ny paikady hampahomby izany indrindra no mahaliana ireo tanora ireo ka nitondran’ny ADC tompon’andraikitra samihafa. Samy nitondra fanazavana izay tandrify azy ireo olona nasaina, anisan’izany ny avy amin’ny banky, minisiteran’ny Indostria sy ny varotra. Tao koa ireo nilazalaza ny dingana nolalovany tamin’ny fananganany ny orinasany. Nasaina nametraka fanontaniana ireo tanora, ary namaly izany ny tompon’andraikitra isanisany. Olana faheno matetika nasongadin’ireo tanora ny fahasarotana eo amin’ny fahazoana famatsiam-bola na manana tetikasa mazava tsara aza.
Etsy andaniny, ny banky anefa tsy maintsy mila antoka ary ny zanabola mbola ambony eto amintsika. “Tsara ho fantatra fa ny banky tsy mpamono afo, noho izany tsy maintsy tetikasa azo antoka fa hahatafaverina ny volany no hindramam-bola ao aminy. Vitsy loatra ny Malagasy manana petra-bola mahatonga ny zanabola mbola ambony. Ny banky anefa, manao raharaham-barotra, mitady tombony amin’izay ataony”, hoy ny solontenan’ny banky iray.
Tahiry ho an’ny antoka
Na izany aza, nampahafantatra ry zareo fa misy tahiry ho an’ny antoka eto amintsika : Fonds de garantie malgache sy ny Solidis Capital. Afaka manampy ireo amin’ny famolavolana ny tetikasa, manadihady ny lalànan’ny tolotra sy ny tinady momba izany tetikasa izany. Ny eto an-toerana matetika, raha mahita fahombiazana ny iray, mihazakazaka manao mitovy amin‘iny ny maro, lasa mampitobaka ny sehatrasa tsy ara-dalàna, manimba ny efa mandeha. Amin’izay tetikasa heverina hatao, mila halalinina tsara ny tsenam-barotra, ny toerana hanaovana azy, ny akora fototra hoenti-miasa, mombamomba ny mpanjifa…
Olana iray lehibe eto an-toerana koa ny fahamaroan’ny entana avy any ivelany ampidirina eto amintsika, izay tsy ireo tanora ireo ihany no mahatsapa izany, fa ny mpandraharaha ankapobeny, Vondron’ny mpandraharaha, Sendikan’ny indostria … Na misy indostria aza efa mamokatra ireny entana ireny, ohatra, sakafo na fitafiana, ny avy any ivelany hatrany no mahazo laka, satria amidy mora. Ny hetra sy ny masonkarena samihafa anefa mbola lafo ny eto an-toerana, mamono ny orinasa malagasy. Manoloana izany, namintinan’ny ADC ny adihevitra, ny fahasahiana miditra amin’ny fandraharahana.
ADC*: Association devoir et citoyen